Nwere ike ịsọ mpi na Google na nnukwu azụmahịa? | Martech Zone
Tupu iwe iwe m na edemede a, biko gụọ ya nke ọma. Anaghị m ekwu na Google abụghị ezigbo nnweta nnweta ma ọ bụ na enweghị azụmaahịa azụmaahịa na atụmatụ ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ usoro nyocha. Isi okwu m n’isiokwu a bụ na nnukwu azụmaahịa na --achị nsonazụ ọchụchọ na akwụ ụgwọ.
Anyị amatala na ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa bụ ọwa ebe ego na-achị, ọ bụ ụdị azụmaahịa. Ọnọdụ ga-agara onye na-azụ ahịa kachasị elu. Mana usoro nyocha okike di iche. Ruo ọtụtụ afọ, anyị nwere ike ịmepụta ọdịnaya dị mkpa ma dị ịrịba ama ma jiri ụgwọ ọrụ kwụọ ụgwọ ya nọmba 1 n'usoro oke asọmpi isiokwu na Google. Oge ndị ahụ agaala.
Ezigbo enyi Adam Small na-agba ọsọ a ikpo okwu ahia ala. Ọ bụ na nso nso a na New York City na Inman Jikọọ. Rand Fishkin nke Moz bụ ọkà okwu wee kpughee na nyocha ya na ngalaba 5 họọrọ na 5 kasị elu ala na-achọ na ahịa 25 kacha elu na United States
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa ụlọ nke nwere otu narị afọ nwere ahụmahụ na otu n'ime obodo ndị ahụ, ohere ị nwere n'ọkwá dị oke egwu. Ọ naghị adị ka nke a. Nchọpụta ọchụchọ nke Google na-abụ ohere maka azụmaahịa ọ bụla iji mepụta ọdịnaya dị ịtụnanya ma chọpụta ya ma debe ya nke ọma. Anaghị m ekwu na ọ dịghị mgbalị, ọ were ton nke ọrụ… mana ọ ga-ekwe omume.
SimilarWeb ebipụtawo ya Oge onyinye maka 2016. The SimilarWeb Momentum Awards na-amata weebụsaịtị dị na US nke gosipụtara ọganihu pụrụ iche na otu ụdị ntanetị ha na 2016. Ndị mmeri 39 na ngalaba 13 enweela nke ọma ka ha Wnye ọkwa Web - akara ngosi algorithmic nke na - etinye ihe karịrị nde saịtị 80 site na ọnụọgụ okporo ụzọ ha na ntinye aka ha.
N'ime nyocha nke ndị a, ị ga-ahụ na ọchụchọ ahụ bụ nnukwu ihe na-ekpebi ụlọ ọrụ nwere nnukwu ike. Ndị a bụ ndị mmeri ha:
Ahịa n'Onlinentanet chọrọ.com samsclub.com kmart.com
Consumer Electronics igodo.com bestbuy.com bhphotovideo.com
N'uwe Rue21.com victoriassecret.com torrid.com
Genlọ ọrụ njem na ntanetị tripadvisor.com njem.com Egwu
Chains Hotel marriott.com nhọrọhotels.com mmb.com
Ọrụ Ntinye Aka na họtel .comlọ nkwari akụ.com airbnb.com trivago.com
Airlines jetablue.com ihe.com mmụọ.com
Insurance obodo ịga n'ihu.com geico.com
Banking citi.com mpaghara.com navyfederal.org
Car yingzụ ihe carmax.com autotrader.com ụgbọala.com
Akụkọ & Mgbasa ozi nnweta.com realclearpolitics.com politico.com
Egwuregwu Ọgbara ọhụrụ ccm.net ozi.ycombinator.com digitaltrends.com
Akụkọ azụmahịa bloomberg.com ego.cnn.com foxbusiness.com
Budata ReportWeb's Highlight Report maka 2016
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ole na ole na-adịghị achị ụwa, ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ nwere akpa miri emi na-enweta ahịa dijitalụ n'ịntanetị, nke na-eduzi nchịkọta ọchụchọ ha. Companieslọ ọrụ ndị a nwere ike ị nweta atụmatụ ọwa niile, gụnyere ọdịnaya siri ike kwekọrọ na nkwalite akwụ ụgwọ dị ukwuu, weebụsaịtị kachasị mma, yana ịre ahịa. Ngwakọta ahụ dị oke ọnụ - mana ọ na-ebibi asọmpi ahụ.
Nke a bụ ya mere obere ụlọ ọrụ na ndị mbipụta akwụkwọ ga-eji ike ha rụọ ọrụ maka uru ha. Ka ị na-elegara ụlọ ọrụ ndị na-achị Google anya, ịkwesighi iulateomi ha. Ikwesiri iche onwe gi iche na ha, obuna icho ime mkpọsa nke ihe omuma ha nke ha agagh agha. Ndị na-ege gị ntị ka agụụ na-agụ maka ihe dị iche - kedu ka ị ga - esi dị iche? Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwado karịa asọmpi na Google, opekata mpe ị nwere ike ịdabere na mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji bulie ozi gị.
Nke a bụ ya mere onye isi ahịa maka ndị ahịa anyị ji aga n'ihu na-abụ nyocha na mmepe nke infographics, eserese eserese, na akwụkwọ ọcha. Ihe omuma nke oma, mara mma, nke bara uru ga-aga n'ihu na-etinye uche na ikike n'aka ụlọ ọrụ gị. Nwere ike ọ gaghị ọkwa, mana ndị na-ege ntị dị mkpa ị na-achọ ga-ekerịta ma chọta gị.
Tags: 2016gị n'ụlọnga ihendorigoogle +onyeọkụ enọikenyocha ọchụchọakwụ ụgwọ ọchụchọazu azuogoire ala na ụlọiyi ntaneti